जुझारु युवा नेता विजय भट्ट भारी मतसहित जिल्ला सदस्यमा निर्वाचित « रिपोर्टर्स नेपाल
जुझारु युवा नेता विजय भट्ट भारी मतसहित जिल्ला सदस्यमा निर्वाचित
गोरखा, २१ असोज । नेपाली कांग्रेस गोरखा जिल्लाको कार्यसमिती गठन भएको छ । जिल्ला सभापति पदमा सर्वसम्मत भएता पनि बाँकी अरु पदमा भने निर्वाचन नै भएको थियो ।
गोरखा जिल्लाका जुझारु नेता विजय भट्टले अत्याधिक मत ल्याई सदस्य पदमा जित हासिल गरेका हुन । उनले आफ्नो पक्षमा ७४९ मत पारेका थिए ।
को हुन त ? भारी मतका साथ सदस्य पदमा विजयी हुने विजय भट्ट ?
२०६५ सालदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा होमिएका भट्ट आफैमा प्रखर वक्ता, जोशिला र दुरदर्शी छन । गो.न.पा १ घर भएका भट्ट २०६८ सालदेखी नेविसंघमा आफ्नो राजनीति स्थापित गरेको बताउछन । उनी २०७१ सालमा नेविसंघ काठमाडौ इन्जिनियरिङ कलेजको उपसभापति हुँदै सभापतिमा चयन भई विद्यार्थी हक हितको लागि आवाज उठाउने विद्यार्थी नेताका रुपमा चिनिन्छन ।